May 2022 – Page 15 – SainPwar
အပျိုဖော်ဝင်စ လှသွေးကြွ အပျိုဖော်ဝင် စငယ်သွေးကြွလှပ ဆိုသောစကားသည် မိန်းခလေး တယောက် အပျို စဖြစ်စတွင် လှပမူကိုတင် စားထားခြင်းဖြစ် ပါတယ် ။ မိန်းခလေးငယ် တစ်ယောက် အပျိုစဖြစ် စသော ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်း လဲမူကို သိထားသင့်သောအချက်များကို OnDoctor တွင် အမေး များလေ့ရှိ ပါတယ်။ မိဘများအနေဖြင့် လည်းမိမိသမီးငယ် ကို ပြောင်းလဲလာသော လူနေမူ ပတ်ဝန်း ကျင်စိတ်မချ မူကြောင့် အပျိုဖော်ဝင် သည့်အချက် များကို စောစီးစွာ သတိထားသိချင်သော ဆန္ဒကြောင့်မေး ကြပါတယ်။ ...
စာဖတ္မပ်င္းပါနဲ႔ .ဖတ္ၾကည့္ေစ ခ်င္ပါတယ္ ။ ညီေမလး တို႔ေရ ဆင္းရဲတဲ့ လင္မယား ၂ ေယာက္မွာ စာေတာ္တဲ့ သမီးေလး ရွိတယ္ ၊ တစ္ေန႔ သမီးေလးဟာ အတန္းတင္ စာေမးပြဲမွာ ပထမ ရတယ္ ။ ေအဖဟာ ဝမ္းသာလြန္း လို႔ လိုခ်င္တာဝယ္ေပးမယ္ ေျပာတယ္ ။သမီးေလးဟာ သိပ္လိုခ်င္ခဲ့ေပမဲ့ ေအဖမြာ ပိုက္ဆံ မရွိမွန္းသိလို႔ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ္အစား တစ္စုံကိုလိုခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္ တယ္ ။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေအဖဟာ သမီးေလး ...
ဒီလလည်း ထိုင်းထီ အမြင့်ဆုံး ဘတ်(၆)သန်းဆု ရွှေမြန်မာတွေ ကံထူးပြန်ပြီ
ဒီလလည္း ေရႊျမန္မာေတြ ကံထူးျပန္ၿပီ ထိုင္းထီ အျမင့္ဆုံး ဘတ္(၆)သန္းဆုေပါက္ပါတယ္ ထိုင္းထီဘတ္(၆)သန္း ကံထူးသြားတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံက မိသားစုေလး မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္တဲေက်းရြာေန မိသားစုတစ္စုက ထိုင္းထီဘတ္(၆)သန္း ကံထူးသြားပါတယ္ ဝမ္းသာပါတယ္ ရြာမွာ ေအးေဆးလုပ္စားလို႔ရၿပီေပါ့ ရာမညတိုင္း(မ္)သတင္းေအဂ်င္စီ အားလုံး ထပ္တူထပ္မၽွ ဝမ္းသာနိုင္ေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ… ေနာက္အပါတ္ေတြမွာလဲ ျမန္မာနိုင္ငံက လူေတြပဲ ကံထူးနိုင္ၾကပါေစ… သိန္းထီ သန္းထီဆုႀကီးေတြလဲ ဆြတ္ခူးနိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္… ဒီလလည်း ရွှေမြန်မာတွေ ကံထူးပြန်ပြီ ထိုင်းထီ အမြင့်ဆုံး ဘတ်(၆)သန်းဆုပေါက်ပါတယ် ထိုင်းထီဘတ်(၆)သန်း ကံထူးသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ...
ကျိုက်ထို ရွာလေးတစ်ရွာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို ခွဲစိတ်မလို့ လူနာရဲ့ လည်ပင်းက အမဲရောင်ကြိုးလေးကို ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါ….
zawgyi 17-5-2022 #ထူးဆန္းေသာလူနာ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ့နယ္ကေတာရြာေလးတစ္ရြာမွာေနတဲ့ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တစ္ဉီး ယေန႔ခြဲစိတ္ေမြးဖြားမွာျဖစ္လို့ခြဲခန္းထဲသြင္းလိုက္တယ္ ထုံေဆးထိုးဖို့အကၤ်ီလွန္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတြ႕လိုက္ရတာကအလြန္ ထူးဆန္းေသာအမဲေရာင္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္း ခါးမွာပတ္ထားတယ္ ႀကိဳးမွာႏွစ္လက္မျခားၿပီးအထုံးေလးေတြလုပ္ထားတာေတြ႕တယ္ ခြဲစိတ္ကုသခ်ိန္မွာခႏၶာကိုယ္မွာျပင္ပအရာတတ္နိုင္သမၽွဖယ္ရွားထားရပါတယ္ ႀကိဳးကိုေျဖခိုင္းလိုက္ခ်ိန္မွာ လူနာဟာ႐ုတ္တရက္တုန္လွုပ္သြားၿပီးအာ့ႀကိဳးေလးကိုမထိပါနဲ႔ဆရာတဲ့ ဘာလို့လဲေမးေတာ့ သမီးကသိုက္ကလာတဲ့သူမို့အာ့ႀကိဳးကိုျဖဳတ္လိုက္ရင္သမီးကိုသိုက္လာျပန္လာေခၚလိမ့္မယ္ဆရာတဲ့ ေက်းဇူးျပဳ၍အာ့ႀကိဳးေလးမျဖဳတ္ပဲခြဲစိတ္ေပးပါဆရာရယ္ဆိုၿပီေတာင္းပန္ရွာတယ္ ခြဲစိတ္ရမည့္ေနရာနဲ႔မလြတ္မွာစိုးလို့ ႀကိဳးကိုမျဖဳတ္ပါဘူးလည္ပင္းမွာခဏပတ္ေပးထာမယ္ ၿပီးရင္ခါးမွာျပန္ပတ္ေပးမယ္ဆိုၿပီးေခ်ာ့ေခ်ာ့ေမာ့ေမာ့ေလးေျပာလိုက္ရတယ္ သမီးသိုက္ကလာတယ္လို့ယုံၾကည္လားေမးၾကည့္ေတာ့ယုံၾကည့္တယ္ဆရာတဲ့ နတ္ဆိုင္းသံၾကားရင္သမီးကအလိုလိုၾကက္သီးထၿပီးလွုပ္ရြရြ႕ဖစ္လာတာခဏခဏပဲတဲ့ သူေျပာျပတဲ့အရာအားလုံးမွာမွန္မမွန္မေျပာနိုင္ေပးမဲ့သူ႔ရဲ့ယုံၾကည္မွုကိုမပယ္ဖ်က္ပါဘူး ခြဲစိတ္မွုၿပီးေတာ့သူယုံၾကည္တဲ့ႀကိဳးေလးကိုသူ႔ရဲ့ခါးမွာျပန္ပတ္ေပးလိုက္ရတယ္ ထူးဆန္းတဲ့ေန႔တစ္ေန႔ပါပဲ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဉီးစီးဌာန က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ unicode 17-5-2022 #ထူးဆန်းသောလူနာ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ကတောရွာလေးတစ်ရွာမှာနေတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဉီး ယနေ့ခွဲစိတ်မွေးဖွားမှာဖြစ်လို့ခွဲခန်းထဲသွင်းလိုက်တယ် ထုံဆေးထိုးဖို့အင်္ကျီလှန်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတွေ့လိုက်ရတာကအလွန် ထူးဆန်းသောအမဲရောင်ကြိုးလေးတစ်ချောင်း ခါးမှာပတ်ထားတယ် ကြိုးမှာနှစ်လက်မခြားပြီးအထုံးလေးတွေလုပ်ထားတာတွေ့တယ် ခွဲစိတ်ကုသချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်ပအရာတတ်နိုင်သမျှဖယ်ရှားထားရပါတယ် ကြိုးကိုဖြေခိုင်းလိုက်ချိန်မှာ လူနာဟာရုတ်တရက်တုန်လှုပ်သွားပြီးအာ့ကြိုးလေးကိုမထိပါနဲ့ဆရာတဲ့ ဘာလို့လဲမေးတော့ ...
အရမ်းချမ်းလို့ပါ…အရိပ်လေးတခုအောက် နေပါရစေ အင်းစိန်ဘက်မှ ညီမ(၁)ယောက်မှ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်….. အကိုရေ….. ညီမတို့နားမှာ အဖိုး (၁)ယောက်ကို ညနေပိုင်းလောက်က လာပစ်သွားတယ် ဟာ…ဟုတ်လား…ဘယ်အရွယ်လောက်လဲ ဗျ?? ဟုတ်တယ် အကိုရယ်…မိုးရေထဲ အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတာပဲ…အသက် (၅၀)လောက်ရှိပြီ အကို ဟုတ် ကျနော်…လာခဲ့မယ်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရယ်…ကယ်ပေးပါနော်.. ရောက်သွားတော့…… အဖိုးရေ…အဖိုးရေ…ခေါ်တော့(မိုးတွေကရွဲနေရော ) စကားတောင် တိုးတိုးလေးပဲ ပြန်ပြောတယ်….. (မနည်းနားထောင်ရတယ် 🥺) ကိုယ်ကြားလိုက်တဲ့…စကားလေး(၁)ခွန်းက အရမ်းချမ်းလို့ပါ…..အရိပ်လေး တခုအောက် နေပါရစေ တဲ့…. ရင်ထဲ အတော်ထိသွားတယ်… ဟုတ်ပြီ အဖိုး…ကျနော် ကယ်မယ်ဗျာ…ရေစိုနေတဲ့ ...
ရှေးခေတ် မြန်မာ မိန်းမပျိုတို့၏ ဖူးစာဖက် ရွေးနည်း (၁၀) နည်း….
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ မိန္းမပ်ိဳတို႔၏ ဖူးစာဖက္ ေရြးနည္း (၁၀) နည္း…. ေရွးယခင္က ျမန္မာ မိန္းမပ်ိဳမ်ားသည္ လင္ယူ၊ သားေမြး အိမ္ေထာင့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုေသာအခါ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ၾကည့္၍ ဖူးစာဖက္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ၎တို႔မွာ.. (၁)- အရက္မေသာက္၊ ဖဲမရိုက္၊ အေပ်ာ္အပါး မလိုက္ေသာ ေယာက္်ားမ်ိဳး။ (၂)- အေျမာ္အျမင္ႀကီး၍ ဆင္ျခင္တုံတရား ရွိသူ။ (၃)- မ်ိဳးရိုးဇာတိ ျမင့္မား၍ ႐ုပ္ရည္တည္ၾကည္ခန႔္ညားသူ။ (၄)- ပစၥည္းဥစၥာ မႂကြယ္ဝေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စု ...
facebook သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ထားသင့်တဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေး ပါ fbသုံးနေ တဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည် …. ။ တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြော ကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ် ...
ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုကြောင့် ယနေ့မှာကွယ်လွန်သွား Rapအဆိုတော်…..seemore ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုကြောင့် ယနေ့မှာကွယ်လွန်သွား Rapအဆိုတော်….. Rap အဆိုတော် ညီမြတ်သူ ဆိုင်ကယ် မတော်တဆမှုနဲ့ ဒီနေ့ကွယ်လွန် Rap အဆိုတော် ညီမြတ်သူသည် ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုမှ ရရှိခဲ့တဲ့ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာနဲ့ ကုသမှုခံယူနေရင်း ဒီနေ့ မေ ၁၇ရက် နံနက် ၇နာရီ ၁၅မိနစ်မှာ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၎င်းဟာ မေ ၁၅ရက်၊ ည ၁၁နာရီခန့်က မော်လမြိုင်မြို့၊ မဟာမြိုင်ကျောင်းအနီးမှာ ဆိုင်ကယ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေ ဦးခေါင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာ ရရှိပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကနေ ...
ဒီစာကိုသာ ဆုံးအောင်ဖက်လိုက်ပါ တုံးအတဲ့ ယောက်ကျားနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ယောက်ကျားခွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ် ညီမလေးတို့..
တုံးတဲ့ယောကျာ်းက” မင်းရဲ့Bodyအချိုးအစားကိုကြည့် မယ်။…. ထက်မြက်တဲ့ ယောကျာ်းကမင်းရဲ့စိတ်ထားကိုကြည့်မယ်။ တုံးအတဲ့ ယောကျာ်းက “မင်းရဲ့Background ကိုကြည့်မယ်၊……၊၊ ထက်မြက်တဲ့ယောကျာ်းကမင်းရဲ့ဘ၀ ခံယူချက်နဲ့ “ကြိုးစားစိတ်ရှိမရှိကိုကြည့်မယ်၊ တုံးအတဲ့ ယောကျာ်းက”မင်းsexyကျမကျကိုကြည့်မယ် ထက်မြက်တဲ့ ယောကျာ်းကမင်းအသိဥာဏ်ရှိမရှိကိုကြည့်မယ် တုံးအတဲ့ ယောကျာ်းက”မင်းရုပ်ရည်ကိုကြည့်မယ်။ ထက်မြက်တဲ့ယောကျာ်းကမင်းရဲ့မျက်နှာကျက်သရေရှိမရှိကို ကြည့်မယ်။…..၊ ဒီလိုပါပဲ ……ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့ယောကျာ်းကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမကြည့်ပဲသူ့”ပျော်ရွင်မှုကိုပဲကြည့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ ယောကျာ်းကကိုယ်နဲ့သူ့ဘ၀အတွက် ကြည့်မယ် ဒါပါပဲ….! unicode တုံးတဲ့ယောကြာျးက” မငျးရဲ့Bodyအခြိုးအစားကိုကွညျ့ မယျ။…. ထကျမွကျတဲ့ ယောကြာျးကမငျးရဲ့စိတျထားကိုကွညျ့မယျ။ တုံးအတဲ့ ယောကြာျးက “မငျးရဲ့Background ကိုကွညျ့မယျ၊……၊၊ ထကျမွကျတဲ့ယောကြာျးကမငျးရဲ့ဘဝ ခံယူခကြျနဲ့ “ကွိုးစားစိတျရှိမရှိကိုကွညျ့မယျ၊ တုံးအတဲ့ ...
လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေလာက္က ထိုင္းနိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ့ (၅) ႏွစ္ၾကာ လက္တြဲခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူေကာင္ေလးကို လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေတြဆီကေန လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းသင့္တယ္လို႔ ယူဆထားၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ က်ေတာ့လည္း ခ်စ္ရင္ဘာမွ ေတြးေနစရာ မလိုဘူး၊ သူလက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းေတာင္း၊ ကိုယ္လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းေတာင္း ေပါင္းဖက္ရရင္ ေတာ္ၿပီလို႔ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းသင့္သလား ယခုေခတ္ အခ်ိန္ကာလမွာသာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္လို႔ လက္ထပ္ၾကေပမယ့္ ...